Kalay Tamu Highway Myanmar | (0)
ကလေး - တမူး ကားလမ်းကလေး - တမူး ကားတွေ ကလေး မြို့တွင်း ကားလေးဝင်း ကနေ နေ့စဉ် ထွက်ပါတယ်။ Van (Town Ace) နဲ့ မှန်လုံ ကားတွေ ပြေးဆွဲပါတယ်။ ကားကြီးတွေလဲ ပြေးဆွဲပေမယ့် ကုန်အဓိက တင်တဲ့ အတွက် လူစီးလို့ အဆင် မပြေပါဘူး။ Van ကား ၂၅၀၀ ကျပ်၊ မှန်လုံ ၂၀၀၀ ကျပ် ဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးက နေ့စဉ် နံနက် ၇ နာရီ နဲ့ နေ့လယ် ၂ နာရီ ထွက်ပြီး၊ တမူးကနေ နံနက် ၉ နာရီနဲ့ နေ့လယ် ၂ နာရီ ထွက်ပါတယ်။ကလေးက ကားမထွက်မီ မှတ်ပုံတင် တွေကို ကားမောင်းသူထံ အပ်နှံ ရပါတယ်။ ကလေး အထွက် စစ်ဆေးခြင်း မရှိပါ။ ကားလမ်းမှာ အထူးပင် ကောင်းမွန်ပါတယ်။ အိန္ဒိယ အကူအညီနဲ့ ဖေါက်လုပ် ထားတာလို့ သိရပါတယ်။ အချို့ နေရာတွေမှာ ကျင်း၊ ချိုင့် အနည်းငယ် ရှိသည်မှ အပ တော်တော် ကောင်းပါတယ်။နှစ်လမ်းမောင်း ဖြစ်ပြီး လမ်းညွှန် ဆိုင်ဘုတ်များ ပြည့်စုံစွာ ရှိပါတယ်။ကလေးက မိုင် (၆၀) ခန့်မှာ ခန်းပတ် မြီု့နယ်ခွဲကို ရောက်ရှိပါတယ်။ ခန်းပတ်မှာ ကားတွေ ခဏ ရပ်နားပြီး convoy ဖွဲ့၍ ရဲ၊ တပ် ...
Tagged: Kabaw Valley, Kalay Myo, Myanmar Travel, Tamu
Buses to Tamu leave every day from the bus terminal in Kalay. Buses leave at 9:00 AM and 2:00 PM everyday. The vans (Town Ace) cost 2,500 kyatsaperson while the minibuses cost 2,000 kyats. There are big buses too but they mainly carry goods and not very convenient for people to travel. Buses from Tamu leave at 9:00 AM and 2:00 PM everyday.Passengers have to hand over their ID cards to the driver before start of the trip. There is no search on leaving Kalay. The road is very nice except forafew bumps and holes. The ...
Internet Cafe in Kalay Myo Myanmar | (0)
Internet Cafe in Kalay Myo Myanmar | (1)
ကလေးမြို့က Internet Cafeကလေးမြို့မှာ Internet အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ လက်ရှိ Internet Cafe နှစ်ခုရှိပါတယ်။ ကလေး ကားကြီးဝင်း အနီးက Moon Star Internet Cafe မှာ ကွန်ပြူတာ ၁၀ လုံးလောက် ရှိပြီး အသုံးပြုရတာလဲ အဆင်ပြေပါတယ်။ ဈေးကတော့ တစ်နာရီ ၁၅၀၀ ကျပ်ဆိုတော့ အတော် ကြီးပါတယ်။ မီးမလာတော့ မီးစက်နဲ့ သုံးရလို့ပါ။ G-mail သုံးနိုင်ပါတယ်။ G-talk အတွက်တော့ တစ်နာရီ ၂၀၀၀ ကျပ် ကျပါတယ်။ Connection Speed ကတော့ တော်တော် နှေးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သုံးတဲ့ သူတွေတော့ အတော်များပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက ကလေး မြို့လယ်မှာပါ။ မသုံးဖူးပါဘူး။ ဈေးက အတူတူ ပါပဲ။
Kalay Myo Myanmar | (0)
Kalay Myo which is situated in Sagaing Division, on the west bank of Chindwin River, is quitealarge city. Being on the way to Tamu, which is the major border trading town on the Indian border, and also the port of entry to northern Chin State towns, including Hakha, Htangtalan, Tiddim, Tunzan and Falam, Kalay has established itself asamajor commercial center on the west bank of Chindwin River.Kalay has four wards, the most famous being Tarhan ward. About half the population are Chin people, mostly coming from northern Chin region. Many are from Tiddim,alarge town ...
ကလေးမြို့ချင်းတွင်းမြစ်ရဲ့ အနောက်ခြမ်းမှာ ရှိတဲ့ စစ်ကိုင်းတိုင်း ကလေးမြို့ဟာ အတော်ကြီးတဲ့ မြို့ကြီးတစ်မြီု့ပါ။ အိန္ဒိယ နယ်စပ် တမူး ကုန်သွယ်ရေး လမ်းပေါ်က အချက်အချာ ကျတဲ့ မြို့ကြီးတစ်မြို့ ဖြစ်သလို ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း မြို့တွေဖြစ်တဲ့ ဟားခါး၊ ဖလမ်း၊ ထန်တလန်၊ တီးတိန်၊ တွန်းဇံ မြို့တွေရဲ့ ဝင်ပေါက်လဲ ဖြစ်တဲ့အတွက် အလွန်ပဲ စည်ကားလှပါတယ်။ကလေးမြို့ဟာ ကြီးမားကျယ်ပြန့်ပြီး လူဦးရေလဲ များပြားပါတယ်။ ရပ်ကွက်ကြီး (၄) ခုရှိပြီး တာဟန်း ရပ်ကွက်ကတော့ နာမည်ကျော်ပါတယ်။ ချင်းလူမျိုး အများအပြား နေထိုင်ကြပြီး မြို့ လူဦးရေရဲ့ ထက်ဝက်ခန့် ရှိပါတယ်။ ကလေးက ချင်းအများစုဟာ ချင်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းက ဖြစ်ပြီး တီးတိန်က အများဆုံးပါ။အားလုံးလိုလို ခရစ်ယာန် ဘာသာဝင်တွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ လူနေမှု အဆင့်မြင့်မားပြီး ဝတ်စားဆင်ယင်မှုလဲ ခေတ်မှီ ကြပါတယ်။ ကလေးကို မန္တလေး ကတဆင့် ကားနဲ့ သွားနိုင်သလို လေယာဉ်နဲ့လဲ သွားနိုင်ပါတယ်။ Air Bagan က တစ်ပါတ် (၂) ကြိမ် ပျံသန်းပါတယ်။ လက်မှတ်ခက ၆၈၀၀၀ ကျပ် ဖြစ်ပါတယ်။ကလေးက ဟားခါး၊ တီးတိန်၊ တွန်းဇံ မှန်လုံကားတွေ နေ့စဉ်ထွက်ပါတယ်။ ကားကြီးဝင်း ကပါ။ တမူးကား တွေကတော့ ကားလေးဝင်းက နေ့စဉ် ထွက်ပါတယ်။လေယာဉ်ကွင်းရှေ့မှာ တောင်ဇလပ်ဟိုတယ် ရှိပါတယ်။ ကားကြီးဝင်း အနားက ချင်းတောင်တန်း တည်းခိုခန်း ကတော့ သန့်ရှင်းသပ်ရပ်ပြီး ဈေးနှုန်း ချိုသာပါတယ်။ တစ်ဦးကို ...
From Kalay Myo Myanmar | (0)